26 Eskisehir | RayHaber
घरटर्कीकेन्द्रीय एनाटोलिया क्षेत्र26 Eskisehir
राष्ट्रिय वाईएचटी सेटहरू एस्कीहिरमा उत्पादन गर्नुपर्दछ; इओएसबीका अध्यक्ष नादिर कापेलीले टेलोमासका महाप्रबन्धक हेरी अवेसीको भ्रमण गरे र भने कि एस्कीहिरमा द्रुत रेलको सेट उत्पादन गर्नुपर्दछ। Eskişehir संगठित औद्योगिक क्षेत्र [अधिक ...]
इस्तानबुलबाट रेलमा एस्कीहिर जान चाहनेहरूले कोन्य टिकट किन्नु पर्छ
इस्तानबुलबाट रेलमा एस्कीहिर जान चाहनेहरूले कोन्य टिकट किन्नु पर्छ; कुनै पनि मितिमा इस्तानबुल Sogutlucesme बाट Eskisehir को लागि टिकट किन्न चाहने यात्रीहरूले ठाउँ पाउन सक्दैनन्। जे भए पनि, उहि मिति र उही ट्रेनमा कोन्या जान चाहनेहरू [अधिक ...]
Eskisehir मा व्यापार राम्रो समाचार ..! महिला बस ड्राइभर रोजगार हुन
Eskisehir मा व्यापार राम्रो समाचार ..! महिला बस ड्राइभर रोजगार हुन; एस्कीहिर महानगरपालिकाले यो घोषणा गरेको छ कि यसले महिला बस चालकहरूलाई सामाजिक मिडिया खाताहरू साझेदारी गरेर रोजगार दिनेछ। Ini महिला जीवनको सबै क्षेत्रहरु मा संलग्न हुनुपर्छ। [अधिक ...]